हुण्डी कारोबारी शाह विरुद्ध ४ अर्ब १६ करोड बिगो दावीसहित मुद्दा « Naya Page
हुण्डी कारोबारी शाह विरुद्ध ४ अर्ब १६ करोड बिगो दावीसहित मुद्दा
प्रकाशित मिति :4February, 2019 7:01 pm
काठमाडौं, २१ माघ : विदेशी विनिमय अपचलन (हुण्डी) मा सर्वाधिक बिगो दावी गरी साेमबार धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले ८ जनाविरुद्ध ४ अर्ब १६ करोड बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले आठ जना विरुद्ध ४ अर्ब १६ करोड बिगो दावी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए। ।
मुद्दा दायर भएका प्रतिवादीमा रामेश्वर शाह ‘पुर्वे’, उनकी श्रीमति मिनादेवी शाह र काम गर्ने विजय यादव, मोख्तर अहमद, सन्तोष महतो, नरेश महतो, सुरज ठाकुर र पप्पु कुमार दास छन् । आरोपितविरुद्ध जनही बिगोको तीन गुणा जरिवाना र ३ वर्ष कैद मागदाबी गरिएको छ । दासको हकमा भने नाबालक (१५ वर्षीय) भएकाले आधा सजाय दावी गरिएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागको पथलैया कार्यालयले उक्त मुद्दा दायर गरेको हो । गत २२ पुसमा प्रहरीले पुर्वेको घरमा छापा मारी ८३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ र ५ सय दरका ६ हजार ५ सय भारतीय रुपैयाँ (भारु) बरामद गरेको थियो । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन अन्तर्गत उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।
उनीहरुले आपसी मिलेमतोमा ह्वाट्स एप एप्लिकेशनको माध्यमबाट हुन्डी कारोबार गरेको पुष्टि भएको विभागको भनाइ छ । ‘एप्लिकेशनको माध्यमबाट परस्पर हुन्डी कारोबारका विवरणहरु सांकेतिक शब्द र चिन्ह प्रयोग गरी आफ्ना गुटमेलका कारोबारीसँग आदनप्रदान गरेर विदेशी मुद्रा र नेपाली रुपैयाँ ठूलो परिमाणमा अवैध रुपमा अन्तरदेशीय कारबोर गरेको प्रमाणित भएको छ’, विभागले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
बालबालिकाको प्रशंसा गर्न चुक्नु भयो कि !
काठमाडौं, ७ माघ । तपाईंले कहिल्यै बालमनोविज्ञानको बारेमा सोच्नु भएको छ ? उनीहरुको आनीबानी व्यवहारको
काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा छाउनीमा हेमोडाईलासिस सेवा सुरु
काठमाडौं,७ माघ । काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाली सेनाबीच स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धको सम्झौता–पत्रमा हस्ताक्षर
अब संगीत सुन्दै शौच !
बाँके, ७ माघ । तपाई नेपालगञ्जवासी हुनुहुन्छ या यहाँको पाहुना । यदि तपाई नेपालगञ्जमा हुनुहुन्छ
अब १० मिनेटमै घुम्नुस् दामोदर कुण्डदेखि त्रिवेणीधाम
बागलुङ, ७ माघ । बागलुङ नगरपालिका–४ कुँडुलेफेदीमा आकर्षक शैलीमा निर्माण गरिएको भूमिगत सङ्ग्रहालय पर्यटक र